Sida loogu isticmaalo qolka | Ota Ward Plaza
<Digniin> Bakhtiyaanasiibka bakhtiyaanasiibka (*) ayaa loo beddelay si looga hortago infekshannada cusub ee coronavirus.
Qolka kulanka 1.2.3.4
Qolka 1.2aad ee qaabka Jabbaan
Qolka shaaha, qolka farshaxanka
Habka bakhtiyaa-nasiibka Kaqeybgal bakhtiyaanasiib ka socda Ota Citizen's Plaza Small Hall.
Habka muddada dalabka Qaabilaada waxaa laga aqbalaa Ota Ward Plaza Small Hall laga bilaabo 13:20 ilaa 14:00 maalinta bakhtiyaanasiibka.
(Bakhtiyaa-nasiibka ayaa bilaabmaya 14:00) Qaabilaada waxaa laga aqbalaa Ota Ward Plaza Small Hall laga bilaabo 9:20 ilaa 10:00 maalinta bakhtiyaanasiibka.
(Bakhtiyaa-nasiibka ayaa bilaabmaya 10:00) Laga bilaabo 4-ka illaa dhammaadka bisha, afar bilood ka hor bisha isticmaalka, ka dalbo ugu Ugu Net, Ota Ward Plaza, ama daaqadda xarunta ee Ota Ward.
Deadline Waqtiga kama dambaysta ah ee bixinta Laga bilaabo taariikhda bakhtiyaa-nasiibka illaa 20-ka isla bishaas
Meesha soo dhaweynta arjiga
· Waqtiga soo dhaweynta Fagaaraha Daejeon Citizen
(Marka laga reebo maalmaha xiran) Ta Fagaaraha Ota Citizen
(Marka laga reebo maalmaha xiran)
Facility Xarun kasta oo isbitaalka ka mid ah
Deadline Waqtiga kama dambaysta ah ee bixinta Fadlan bixi waqtiga codsiga.
Haddii aad wax ku dalbato khadka tooska ah, fadlan ku bixi 14 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda arjiga.
Haddii aad ka dalbatay miiska, fadlan bixi waqtiga codsiga.